Published June 4, 2020 at 10:57 PM CDT
Socdaal ayaa loo qorsheeyay gelinka dambe ee Jimcaha. Dadku waxay qorsheynayaan inay ku soo urursadaan Beerta Cook Park marka ay tahay 2 p.m. iyadoo socodku marayaa saddex. Munaasabadan ayaa waxaa soo abaabulay arday ka socota West High.
Dimuqraadiyiinta Iowa iyo hogaamiyaasha madoow waxay ugu baaqayaan tilaabo deg deg ah oo ay qaadaan sharci-dajiyayaasha gobolka in lagu soo afjaro cadaalad darrada midab-takoorka waxayna soo jeediyeen dhowr biilal inta lagu gudajiro kalfadhiga sharci dajinta.
Mid ayaa ka dhigaya sharci darro in booliisku ay isticmaalaan xakameyn ama xakamayn qoorta haddii uusan qof khatar gelin.
Mid kale ayaa sharci darro ka dhigaya waaxyada booliska Iowa inay shaqaaleeyaan saraakiisha shaqada laga eryay ama is casilay iyaga oo baaraysa anshax xumo weyn ama xoog xad dhaaf ah.
Gov. Kim Reynolds iyo afhayeenka aqalka Pat Grassley, oo labaduba reer Republican ah, ayaan raacin fikradaha laakiin waxay sheegeen inay diyaar u yihiin wadahadal.
Saraakiisha caafimaadka ee Degmada Dakota waxay sheegeen in hal dhimasho oo dheeri ah ay sabab u tahay COVID-19 wadarta guud ee 27. Ma jirin wax dhimasho ah oo cusub oo ka dhacday Gobolka Woodbury.
In ka yar shaqaalaha Iowa waxay u xareysanayaan shaqo la'aan maadaama xaddidaadaha COVID-19 ay qeyb ahaan kor u qaadeen ganacsiyada ku baahsan gobolka.
Warbixinta horumarinta Iowa Workforce Development ku dhawaad ​​7,000 oo shaqaale ah ayaa gudbiyay sheegashooyin cusub oo shaqo la’aan ah usbuucii hore.
Taasi waa hoos u dhac boqolkiiba 50 ah usbuucii hore.
Wadarta tirada dadka Iowan ee sii wadata helitaanka dheefaha shaqo la'aanta ayaa hoos uga dhacday ilaa 165,000.
Maktabadda Dadweynaha ee Magaalada Sioux waxay ku dhawaaqday qorshe hawleed qayb ah oo dib loogu furay.
Waxay ka bilaabanayaan qaadista xiriika dadka aan xirneyn ee Laanta Perry Creek oo ku taal Hamilton Boulevard Isniinta, Juun 15-keeda.
Goobaha kale ayaa laga furi doonaa todobaadyada bulshada iyada oo bulshada laga fogaanayo iyo tillaabooyin caafimaad iyo badbaado ayaa jira
Local NewsLocalIowaNebraskaSouth DakotaSioux City Public LibraryIowa Governor Kim ReynoldsNAACPUnity in the CommunitynewsCOVID-19SomaliGeorge FloydMinneapolis